Ma adag tahay in la isticmaalo bogga wax soo saarka SEO?
Inta badan, naqshadeynta boggaaga wax soo saarka waxay ka timaadaa laba siyaabood oo kala duwan. Marka ugu horeysa, waxay ku bilaabataa iyada oo ay ku haboon tahay waayo-aragnimo u leh waayo-aragnimo qofeed oo saaxiibtinimo leh si ay u kobciso inta badan martidaada macaamiisha dhabta ah. Sidaa oo kale, intaa ka dib shaqooyinka aad ka shaqeyneysid waa in ay daboolaan bogga wax soo saarka ee SEO, oo loogu talagalay inay bixiso dukaanka e-Ganacsi aad u fiican oo muuqaal ah, iyo sidoo kale gaadiidka sare iyo isbeddelada wadista dakhliga ka dambeeya. Laakiin sida loo maareynayo guul-ga raadinta mashiinka raadinta ee boggagaaga si marwalba loogu sii joogo SERPs Google? Aan fiirino waxyaabaha muhiimka ah ee bogga wax soo saarka ee badeecada ah Waxaan ka helay macquul ah in aan wado mashruucyada hore ee e-commerce iyo sidoo kale.
Nuxurka aasaaska badeecada SEO
Sida cad, bogga wax soo saarku wuxuu u eg yahay sida bogga kale ee internetka ee internetka - tanya jawab perjudian online. Taasina waa sababta ay u soo jeedinayso in dhammaan noocyada raadinta 'Search Engine Optimization' loogu talagalay maadada la midka ah ee khuseeya ujeedada bogga ee wax soo saarka ayaa macno samaynaya. Sidaa daraadeed, aan aragno kooban oo ku saabsan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee muhiim u ah boggaaga badeecada SEO:
Si fiican u shaqee si aad u hesho magac dhammaystiran si aad u muujiso magacaaga alaabooyinkaaga, oo ay ku jiraan hay'ad soo saaraha ama calaamad , marka la adeegsan karo. Tixgeli ereygaaga ugu muhiimsan ama xitaa khudbadda muhiimka ah ee muhiimka ah ee cinwaankaaga bogga.
Ka feker waxyaalaha ugu muhiimsan ee erayada suurtogalka ah ee laga yaabo inay u soo baxaan mawduucaaga ama erayada ereyada caanka ah ee loo adeegsado dhinacyada isbahaysiga ee warshadahaaga. Waxaan u jeedaa halkan in isticmaalka, tusaale ahaan, gaabinta caadiga ah sida erayga muhiimka ah uu noqon karo go'aan caaqil ah. Sababtoo ah marar badan oo la yaabay dadka waxay u badan tahay inay isticmaalaan su'aalo gaar ah oo gaar ah codsiyada raadinta.
Samee waqti iyo dadaal dheeraad ah sharaxaadda alaabtaada. Sida bogga kale ee bogga kale, waa inaad sameysaa qoraallo khaas ah oo tayo sare leh si ay u sameeyaan faraqa u dhexeeya dukaankaaga internetka iyo liisyada kale ee qaraabadaada oo si macquul ah u soo galaya internetka. Waligaa ha qaadan wax sharraxaad asal ah oo asal ah oo ka imanaya soo saarayaasha marka ay joogaan, ama xataa qayb ka mid ah. Isla mar ahaantaana, iska ilaali in aad haysatid maaddo isku dhafan qiimaha oo dhan. Haddii kale, sharraxaadada alaabtaada waxaa lagu aqoonsan doonaa Google oo aan aheyn mid gaar ah, sidaa daraadeed waxa ay ku adkaan doontaa in wax kasta oo ka sarreeya natiijooyinka raadinta.
Ku dhaji walx kasta oo muuqaal ah ee sharaxaadadaada sheygaaga leh qoraal sax ah oo qoraal ah. Xasuuso, iyada oo aan lahayn cod Muuqaalka hoose matoorada raadiyuhu si sahlan uma akhrin karaan oo fahmi karaan sawirada ku yaala bogagga alaabtaada. Waxaan kugula talinayaa inaad ku darto magacaaga sheygaaga sheyga ugu weyn ugu yaraan hal mar bog kasta.
Sidoo kale, ha ilaawin inaad marto soo bandhigid iyo sharaxaad ku habboon isticmaalka meta. Sida ugu fiican, waa inaad haysatid sharaxaad badan oo khaas ah oo macquul ah. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxay u muuqan kartaa hawl aad u adag. Sidaa darteed, waxaan ku talinaynaa in aad ka bilawdo sharaxaaddaada meta hab ku habboon, i. e. , bedel magaca kaliya ee alaabtaada halkii shey kasta ee badeecada bogga.
Ugu dambeyntii, waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad tagto tixgelin ballaaran oo ku saabsan badeecada bogga SEO. Waxaan ku soo sheegnay mawduucyada aasaasiga ah ee mowduuca, iyada oo aan si taxadar leh u helin dhowr farsamo oo muhiim ah ee bogga badeecada ee SEO (sida schema. org, ama xogta shaashadda furan). Marka, hubso inaad si fiican u barato wax kasta.